Xiaomi Mi A2 Lite: Emechara nhazi na nkọwa ya | Gam akporosis
Xiaomi bu ihe eji emeputa ahia nke weputara otutu igwe na ahia. Akara ndị China na-eji igwe ọhụụ na-agbasawanye ngwaahịa ya. N'oge a, anyị nwere ozi ndị ọzọ gbasara onye ọzọ so n'ezinụlọ. Nke a bụ Xiaomi Mi A2 Lite, nke nwere ike ịbụ ihe nlereanya ọhụrụ nke ika na gam akporo Otu.
Ruo ugbu a ọ nweghị ihe a maara banyere ụdị a. Mana ọ bụ izu ụka a ka Nkọwapụta izizi nke Xiaomi Mi A2 Lite a abanyela. Ya mere na anyị nwere ike ugbua nweta a ghọtakwuo echiche nke ekwentị.
Ekwentị agafeela TENAA, yabụ na anyị nwere ụfọdụ nkọwa ya na anyị. Ọzọkwa, a nụrụ kepu kepu na Enwere ike gosiputa Xiaomi Mi A2 Lite na ihe omume na India na June 7. Mana nke a ekwenyebeghị.
Na mgbakwunye na nkọwa ya, anyị nwere atụmatụ nke ekwentị, nke ị nwere ike ịhụ na onyonyo a. A na-atụ anya na ị ga-enwe a 5,84-anụ ọhịa ihuenyo na notch na elu. Mkpebi ahụ ga-abụ FHD +. Banyere nhazi ahụ, amaghi ụdị ihe a kapịrị ọnụ, mana ọ ga-abụ isi asatọ.
A ga-enwe ọtụtụ nsụgharị nke Xiaomi Mi A2 Lite na usoro nke RAM na nchekwa dị n'ime. Anyị ga-enwe nsụgharị nke 2, 3 na 4 GB nke RAM. N'ime usoro nchekwa ị nwere ike ịhọrọ n'etiti 16, 32 na 64 GB. Dịka ị pụrụ ịhụ na onyonyo a, ekwentị nwere ihe mkpịsị aka mkpịsị aka na azụ. Ekpughewo na ọ ga-enwe batrị 4.000 mAh.
Mgbe ke ikpehe foto, anyị nwere ike na-atụ anya a 5 MP n'ihu igwefoto na okpukpu abụọ azụ 12 + 5 MP. Na mkpokọta, anyị nwere ike ịhụ na Xiaomi Mi A2 Lite a anaghị ahapụ uto ọjọọ n'ọnụ. N'ihi ya, ọ na-ekwe nkwa na-a-akpali nnọọ mmasị nlereanya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Xiaomi » Akpachapụrụ nkọwa ndị mbụ nke Xiaomi Mi A2 Lite
Google Pixel nwere Snapdragon 710 ga - abata na 2019